Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida Loo Xulo Qalabyada Maydhashada Cusub
2020 / 10 / 02 QoondayntaTilmaamaha qasabada 12335 0
Qalab wanaagsan iyo qasabado? Ugu horreyntii, waa inay ka bilaabataa maaddada. Hadda waxyaabaha guud waxay badanaa isticmaalaan 59 naxaas ah. Si fudud u fahmi inay tahay daawaha naxaasta oo leh naxaas ah 59%. Tani waa kiiska dhammaan qasabadaha naxaasta ah ee suuqa ku jira. Maaha naxaas saafi ah. Maarta saafiga ahi waa jilicsan tahay. Tubbo ha la dhigin Laakiin 59 maar waa uun eray guud. Waxaa jira farqi u dhexeeya heerarka aan caadiga ahayn iyo kuwa heer qaran. 56%, 57%, iyo 58% ka kooban warshadaha waxaa lagu magacaabaa 59 copper. Dabcan, waxaa sidoo kale jira waxyaabo naadir ah oo naxaas ah. Halkan ka hadli maayo! Tani waa hal sabab oo ah kala duwanaanshaha qiimaha. Macaamiisha caadiga ah, ma jirto hab lagu kala garto naxaasta.
Marka sidee loo kala soocayaa alaabada laga sameeyay naxaasta wanaagsan? Tani waa arrin welwel ku leh qof walba. Maaddooyinka naxaasta ah ee liita waxay leeyihiin waxyaabo naxaas ah oo hooseeya, badeecooyinka la sameeyayna waa kuwo jajaban, ama qalabka qaar gabi ahaanba lama baabi'in karo, qaabab badan oo qaab-gaar ah u gaar ahna lama sameyn karo. Waxaan u baahannahay oo keliya inaan fiiro gaar ah u leenahay in dusha badeecaddu ay fidsan tahay, gaar ahaan iftiinka iftiinka, oo si muuqata loo arki karo, haddii ay jiraan meeris aan caadi ahayn oo dusha sare ah, iyo in dusha sare uu mugdi yahay. Guud ahaan marka la hadlayo, sheygu waa siman yahay, fidsan yahay oo dhalaalayaa, qalabkuna dhammaantood ma xuma.
Ka dib markii aan ka hadalnay qalabka, waxaan ka hadlaynaa spool. Tikniyoolajiyadda loo yaqaan 'spool technology' hadda waa mid aad u bislaatay Guud ahaan, wax dhibaato ah malaha haddii loo isticmaalo in ka badan shan sano. Qulqulka liita waa hal yuan, kulaha wanaagsanna waa tobanaan yuan. Halkee ayuu ku kala duwan yahay? Midka hore waa qolof caag ah. Qolof ka sameysan caag dib loo warshadeeyay waa jaban yahay, adkeysiga walxaha cusubna waa mid aad u wanaagsan. Had iyo jeer way dhacdaa in usheeda dhexe ee waalka uu jabo dhowr sano ka dib. Midda labaad ayaa ah dhoobada dhoobada, adkaanta qolka dhoobada ayaa aad muhiim u ah, xirnaanshaha dabacsanna waxaa sababa dhaawaca soo gaaray dhoobada dhoobada ah. Mar labaad, waa sax. Weligaa ma la kulantay dhawaaq gaar ah oo aad u weyn marka qasabaddu ay biyaha karkarinayso, oo xitaa waxaad dareemeysaa in dhuumaha biyuhu ay socdaan maxaa yeelay xudunta waalka ma aha mid hawo leh oo hawaduna waxay galeysaa dhuumaha biyaha. Ugu dambeyntiina, teknolojiyadda, teknolojiyadda caadiga ah ee joogtada ah ee tikniyoolajiyadda joogtada ah iyo teknolojiyadda caajisnimada, tikniyoolajiyadda joogtada ah ayaa dejisa marinka ugu sarreeya ee qulqulka waalka, si kasta oo ay cadaadiska biyuhu u sarreeyaan, biyaha soo saaraya kama dhaafi doonaan heerka caadiga ah ee wax soo saarka biyaha; tiknoolajiyada caajisnimada ayaa ah dhoobada dhoobada ah ee xiran. Inta hawshu socoto, ma jiro wax khilaaf ah oo loo soo saaray si looga hortago in shaabadu ku filnaato.
Muxuu u eg yahay spool fiican? Gacantu waxay dareemeysaa iftiin, waxaana jiri doona dareen jilicsan oo ku saabsan geedi socodka leexashada, gaar ahaan marka la daarayo. Sida marka aan baabuur wadno oo kale, bilow hufan oo dhaqso leh waa hubaal gaari fiican, laakiin haddii aad dareento jahwareer, waa iska caadi.
Ugu dambeyntiina, aan ka hadalno tuubada tubbada tubbada biyaha. Shaygaani wuxuu umuuqdaa mid aan laqiyaasi karin, laakiin iibinta AMZ waa kumanaan kun, oo tilmaamaysa in tuubadu tahay mid daxalaystay ama daatay Miridhku waa dhacdo caadi ah. Sababta ugu weyn ee xaaladan ayaa ah in jiingadaha la tolay dusha sare aysan ahayn 304 bir bir ah; waxaa la sheegay in tuubadu ay daadinayso, gidaarka gudaha ee tuubada laga galo waa binary ethylene propylene. Tani waxay ku lug leedahay dhumuc iyo waxyaabo cusub iyo kuwo duug ah.
Hore:: Qalabka Dabaqa Musqusha Heer Caan Ah Next: Waa maxay qasabada jikada ugu caansan?